Tuesday August 20, 2019 - 19:26:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Kenya ayaa si adag ugasoo horjeesatay cadaadisyada uu maamulka dabadhilifka u ah ee Jubbaland kala kulmayo waxa loogu yeero beesha caalamka.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in aan la aqbali karin cadaadiska uu xafiiska Q.Midoobay ee Soomaaliya uu ku hayo guddiga doorashooyinka maamulka isku magacaabay Jubbaland.
Dowladda Kenya waxay ku eedaysay James Swan in uu cadaadis gaar ah saarayo guddiga doorashooyinka maamulka Axmed Madoobe, kenya waxay sheegtay in arrintaas ay tahay mid halis gelinaysa wax ay ugu yeertay deganaanshiyaha 'Jubbaland'.
Wasaarada arrimaha dibadda Kenya waxay si cad u sheegtay in Q.Midoobay ay dowladda Itoobiya u xil saartay arrimaha doorashooyinka magaalada Kismaayo arrintaasna ay tahay mid aan laqaadin karin.
Xukumadda Nairobi waxay qoraalkeeda loo diray UN-ka si cad ugu sheegtay in iyadu ay muhiim u tahay howlgalka AMISOM sidaas daraadeed loo baahanyahay in laga talageliyo arrimaha 'Jubbaland'.
"Xildhibaano labaatameeyo ah, saddex kamid ah xisbiyada siyaasada dalka ee ay hogaaminayaan Sheekh Shariif,Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa taageeraya qaabka ay u socoto doorashada Jubbaland.”ayaa lagu yiri qoraalka.
Dhawaqan kasoo yeeray dowladda Kenya oo taageero buuxda u ah Axmed Madoobe ayaa imaanaya saacado kadib markii melleteriga Kenya uu garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka celiyay diyaarad sidday askar iyo saraakiil katirsan ciidamada Itoobiya.
Kenya oo sanaddii 2012-kii gobolka Jubbada hoose ku qabsatay maleeshiyaad daacad u ah Axmed Madoobe ayaa doonaysa in ay difaacato maamulkan iyada dabadhilifka u ah oo cadaadis siyaasadeed kala kulmaya Farmaajo iyo Abiy Axmed.